Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Mitombo ny Ambaniandro leo Ambaniandro
Fifidianana: Mitombo ny Ambaniandro leo Ambaniandro
Tapabolana lasa izay dia nisy lahatsoratra navoakanay teto amin’ny « La gazette de la Grande Ile » izay nilaza fa misy Ambaniandro leo ny ataon’ny Ambaniandro amin’ny fitondrana tsy manjary nataon’izy ireo teto amin’ny firenena nanomboka hatramin’ny taona 2001 ka hatramin’izao taona 2018 izao. Tenenin’izy ireo amin’izany ingahy Ravalomanana Marc, Andry Nirina Rajoelina, ary ingahy Hery Rajaonarimampianina izay mitondra amin’izao fotoana izao. Tamin’izay fotoana izay dia nanambara ny fikambanana roa izay nahatsapa fa tsy mendrika ny Ambaniandro ny mitondra firenena satria nampijaly vahoaka Malagasy ka nitarika korontana sy tsy fandriam-pahalemana ary fahantrana mihoa-pampana izy ireo. Na ny Ambaniandro namany aza dia lazain’izy ireo fa nopotehiny sy nanaovany valifaty ary nosimbainy hatramin’ny orinasany. Ny any amin’ny faritany indray dia tsy nahitana orinasa intsony rehefa nitondra ny Ambaniandro. Ohatra amin’izany ny tao Mahajanga sy Vatovavy fitovinany ary ny tany Antsiranana ka nahatonga ny fahantrana tamin’ireny toerana ireny ho lalim-paka. Nopotehin’izy telolahy ireo avokoa izany tamin’ny fotoana nitondrany teo hoy ihany ireto olona ireto.
Mahakasika ny eto Antananarivo manokana dia milaza ireto Ambaniandro leo Ambaniandro ireto fa hatramin’ny jiro amin’ny sisin-dàlana aza tsy mirehitra intsony ka manome vahana ny mpangalatra sy ny jiolahy mpanendaka izany amin’izao fotoana izao. Ny eo Analakely dia tsy misy jiro intsony ny andrin-jiron’ny Jirama na iray aza ka mahazo vahana ny mpanao ratsy. Lasa toerana fieren’ny mpivaro-tena sy ny jiolahy sisa ny manamorona ny zaridaina eo afovoan’ity toerana malaza ity amin’ny alina. Tsy hita intsony izany Analakely mahatehotia sy fitsangantsanganana mahafinaritra amin’ny takariva izany. Tsy misy intsony izany kalon’ny fahiny nireharehan’ny mpanao tononkalo sy ny mpihira hoe hoe “ mba tazano somary halaviro izany Iarivo mirehitra jiro”. Soa ihany fa mba misy ny trano manodidina izay manana jiro mirehitra ka manome hazavana mitsilopilopy ny araben’ny fahaleovan-tena sy ny tanànan’Antananarivo.
Santionan’ny fihemoran’Antananarivo sy ny eto Imerina io lazaina io fa maro no zavatra potika sy very rehefa nitondra ny Ambaniandro nanomboka ny taona 2001.
Amin’izao fotoana izao dia nitombo ny olona sy fikambanana miresaka aminay ary milaza fa tsy mety intsony ny hitondran’ny Merina ny firenena. Mpangoron-karena fotsiny sy mpampijaly vahoaka ary tia tena no ilazan’izy ireny.
Fikambanana enina amin’ny fikambanana Ambaniandro no mivonona fa hanohana ny tanindrana amin’izao fotoana izao ka milaza fa hanohana olona avy any amin’ny faritany.
Ny iray tamin’ireo aza dia nilaza ampahibemaso fa tsy mankasitraka izao ataon’ny Ambaniandro izao dia ingahy James Ratsimba. Mpampianatra mpikaroka, mpiaro ny fiandriananam-pirenena satria isan’ny miady mafy amin’ny hamerenan’ny nosy manodidina an’i Madagasikara amin’ny Malagasy (Iles Eparses) izy. Ambaniandro ray, Ambaniandro reny ary saropiaro amin’ny maha Ambaniandro azy dia nilaza fa aleo mijery tanindrana fa tsy mety ny ataonay Ambaniandro amin’ny fitondrana firenena izao.
Tsy ity olona sy ny fikambanana misy azy ihany fa misy manam-pahaizana merina koa mahatsapa izany, ary vondrona mpandraharaha koa. Toa izany koa olona efa nitondra nanankinan’ny vahoaka andraikitra amin’ny fitondrana an’Antananarivo ka kivy amin’ny amin’ny anaovan’ny mpitondra nifanesy teto hatramin’izay 2001 izay. Misy hatramin’ny ambany tanàna sy tanora maromaro mitarika fikambanana no milaza fa tsy hifidy Ambaniandro intsony fa leo. Leo laingalainga sy fitapitaka hono izy ireo raha ny filazany hatrany.
Voalazan’ireto Ambaniandro leo Ambaniandro ireto fa tsy mety toroina hevitra sy mamita-bahoaka ny Ambaniandro rehefa mahazo fahefana. Tsy toa ireo tanindrana teo alohany izay nandray ankitsipo ny feon’ny Merina teto Antananarivo hono raha atao ny fampitahana. Marina hoy izy ireo fa tsy tonga lafatra ny fitondran’ingahy Philibert Tsiranana, Ratsiraka Didier, ary Zafy Albert izay nitondra teo aloha, saingy tsy nampijaly vahoaka toa ny ataon-dRavalomanana Marc , Andry Nirina Rajoelina ary Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao.
Leo, tena leo hono izy ireo amin’ny nataon’izy telo lahy ireo izay nitondra hatramin’ny taona 2001 iny. Mba noheverina fa hanarina ny ratsy nataon’ingahy Ravalomanana Marc ingahy Andry Nirina Rajoelina sy Hery Rajaonarimampianina nefa loza no nataon’izy ireo.
Hifidy sy hijery tanindrana izy ireo ary hanao izay hampandany izay olona hitan’izy ireo fa tokony hitondra ny firenena ka hialan’ny Malagasy amin’izao zava-doza iainana amin’izao fotoana izao. Hitantsika ny tohiny.